Ego ntinye self explanatory t oke ala - jluis37.com
Ego ntinye self explanatory t oke ala
Posted by Lloyd Wilson On June 22, 2021 In My Blog
A na-ekpebi ngwa ngwa nkwụnye ego siten’ụzọ dị omimi nke ụlọ ọrụ self ị họọrọ. Na mkpokọta, ọsọ ọsọ self love bụ nkeji ise. Agbanyeghị, ọ nwere ike iwe ogologo oge karịa ịdabere na ọnụọgụ self love ndị ahịa ga – etinye ego.
N’ime oge self explanatory, ekwesịrị ịchịkwa mbelata oke yana ị kwesịrị itinye egon’èzín’ọnụ ụzọ mbelata. N’ihi itinye self loven’okpuru obere oke abụghị ọkọlọtọ.
Ego ole na ole ị nwere ike itinye bụ 50 TL.
Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nwekwara ike ịdị iche na usoro usoro atụmatụ ego. Iji nweta information dịka oke oke ugbu a, jikọọ na ngalaba’Live Help’. Ndị nnọchi anya ndị ahịa ga – agwakarị gị ihe dị mkpa dị mkpa maka usoro ego. Restbet, nke na agba oso na ntanetị Gaminggba Cha Cha maka ogologo oge, nwere nnukwu nso.
Ọ na-enye onyinye na egwuregwu vidiyo ọkachamara, ndị nnọchi anya ndị ahịa yana ọkwa ọkwa kwụsiri ike. E kwesịrị itinye self love itinye ego na akụnụba ka ị miniature nwee ike ịba ọgaranya ma rite urun’ime egwuregwu vidio ahụ na azụmaahịa azụmahịa.
Website t izipu self service maka ụlọ ọgbakọ gị, ị nwere ike igosipụta ọganiihu gị na egwuregwu vidio ọ bụla yana ngọzi ngọzi. Restbet giriş nkwụnye ego gụnyere ezi uche, nchebe d e ngwa ngwa azụmahịa. Nwere ike iji otun’ime ike dịn’akụkụ akụkụ azụmaahịa azụmaahịa d e ibu ibu na akaụntụ gị.
Hodszọ maka itinye ego ego
Restbet na enye ndin’enye ndi self. Mgbe ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ weebụn’ịntanetị, ịnwere ike ịnweta nkwenye niile nke ozi ahụn’akụkụ akụkụ’Enyemaka self’. Bankslọ akụ nke ụlọ ọrụ azụmaahịa na-arụ ọrụ ama ama na US
Usoro nkwụnye self bụ ndị a; Ntinye Nyefee Onye Nnọchi Ntanetị Ntanetị Nyefee Rocket Lezienụ E-Ego nkịtị Exchange Share Giga may nwere ike izipu self maka akaụntụ ndị na-azụ gị na weebụsaịtị websaịtịn’ịntanetị website Id ụlọ akụ ndị dịn’elu. Nwere ike ịme azụmahịa gị n’ahịrị maka Ama nkwụnye ego.
Obere ego t self Ego ntinye self s – adabere na njedebe na mbido. A na-enyocha oke mbelata nke weebụsaịtị weebụ n’ịntanetị dị ntakịrị na ọtụtụ. Nwere ike ibufere ma ọ dịkarịa ala 50 TL maka akaụntụ ndị na-azụ gị.
Nwere ike izipu self service maka akaụntụ gị dị ka ihe ka ọtụtụn’ime 50,000 TL kwekọrọ na ụbọchị. Agbanyeghị, ịkwesịrị ịdebe oke ụbọchị ugbu a ma mepụta azụmahịa gịn’usoro ụlọ ọrụ self ịchọrọ iji ego.
Etu esi akụ nzọ bọọlụ ma merie nnukwu